Uwe agbamakwụkwọ 37 nke ezumike maka Beach, BBQ, na mmemme ndị ọzọ na 2021 - Ụdị
Uwe agbamakwụkwọ nke oge okpomọkụ nke 37 maka emume ọ bụla
Ịhụnanya dị n'ikuku.
Site n'ikike nke ụdị
otu esi eme ka ntutu m too ogologo
Ewepụrụ ọtụtụ ihe na 2020, yabụ ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa maka uwe ndị ọbịa agbamakwụkwọ n'oge ọkọchị, ọ nwere ike bụrụ na otu onye na ndụ gị na-abịaru ụbọchị ha pụrụ iche, nke a na-eche ogologo oge. Ka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na -apụta ma obodo mepegharịrị na mba ahụ, lovebirds na -apụta na kwarantaini iji mee nke ha nrọ nuptials nke bụ eziokwu — ma ha kpebie ime emume dị ala ma ọ bụ họrọ maka ewu ewu mini-mony.
Maka ndị na -amalite n'oge okpomọkụ otu , mkpakọrịta nwoke na nwaanyị , ma ọ bụ na mmekọrịta na-egosi coronavirus, enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme-ị nwere ike yi uwe nines wee gaa agbamakwụkwọ na-enweghị ekwentị na-enwu gị site n'akụkụ niile. Ọ bụ ezie na ejiri nnọkọ chiri anya dochie ọtụtụ nnukwu bashes, ime ememe ịhụnanya ka na -atọ ụtọ dịka ọ dị na mbụ, ọkachasị mgbe afọ siri ike gasịrị. Yabụ ma ị na -aga n'akụkụ ikuku ikuku ikuku ma ọ bụ soiree dị n'elu ụlọ, zụọ ahịa nhọrọ uwe ndị ọbịa agbamakwụkwọ nke ga -arụ ọrụ ahụ.
Site n'ikike ika 1/37
Ahịrị nke K Avalon otu akwa Midi Didi
Anyị na-ebu amụma na ọtụtụ ndị lụrụ di na nwunye ga-ahọrọ oriri nnabata dị ala n'oge a, nke pụtara na ndị ọbịa ga-eyi uwe agbamakwụkwọ nkịtị na uwe nnabata nke yiri ka ọ mara mma mana ọ bụghị n'elu. Nọmba otu ubu a bụ nguzozi zuru oke n'etiti ọkaibe na izu ike, n'ihi ihe eji achọ mma nke ngwakọta ngwakọta. Mana ọ bụ asymmetry dị n'ihu na azụ na -enye ya ihe pụrụ iche.
$ 140 Net-a-Porter Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 2/37
Ndozigharị Sofia Ifuru-Bipụta Uwe Silk-Satin Midi
Kedu ihe na-ebipụta ifuru a mara mma uwe mwụda ? Ọ mara mma, dị ọnụ ahịa, yana nnukwu agba maka oge ọkọchị. Ọzọkwa, ị nwere ike yikwasị ya nke ọma ma yikwasị ya ọzọ ma emechaa.
$ 200 Net-a-Porter Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 3/37
Uwe ASOS Kere Satin Puff-Sleeve Midi Tea Dress
Obere ntakịrị lavender, gbakwunyere uwe aka na plaid? Ederela ya ịhụnanya oge niile. Nke a ga -abụ nke zuru oke ma ọ bụrụ na ezigbo enyi gị na -eme ya onye ọrụ n'akụkụ kacha nwee ịhụnanya na ogige ntụrụndụ kachasị amasị ya.
$ 54 ASOS Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 4/37
Uwe Akpachapụ Aura Satin Dị Mkpa
Echegbula - ọ bụghị ọcha; ọ bụ pink pink. Na nkọwa ruche na spaghetti-strap azụ bụ izu oke pere mpe.
$ 230 Operandi Ejiji Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 5/37
Maxidress nke Torrid Gray Metallic Liquid Knit
Ọ bụ ezie na silhouette a na-adịkarị obere, ngwụcha ọla na-ewega ya na elu dị njikere maka agbamakwụkwọ.
$ 80 $ 60 Torrid Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 6/37
Jacquemus Laurier yi uwe midi
Nke a abụghị uwe zuru oke Gigi Hadid wepụrụ wig nke ụwa ( Nke ahụ dị nso na -acha ọcha), mana ọ ka na -eje ozi na -enweghị atụ Jacquemus mara maka ya. Ị ga -ele anya na -ekwu okwu a ?! Ọ bụrụ na ị nwere ike itinye ego, onye nrụpụta French bụ nke ị ga -atụle.
$ 790 mgbakasị ahụ Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 7/37
Abụ nke Style Pluto Minidress
Ọkpụkpụ obe, udidi, ọgaranya hue? Alexa, kpọọ Golden site na Harry Styles.
$ 135 Tụgharịa Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 8/37
Ejiji Alice + Olivia Jocelyn Smock Midi na akwa ụta
Ọ bụrụ na ị na -achọ ihe mere ị ga -eji jiri nkọwa ihunanya wee pụọ ma eleghị anya ọbụna mee ihe na -agbagọ agbamakwụkwọ, ọ bụ agbamakwụkwọ, na akwa akwa nwa ọhụrụ a bụ mgbatị ahụ zuru oke.
$ 660 Ụlọ ahịa Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 9/37
Toteme anwụrụ Georgette Maxidress
Beach ma ọ bụ ọzara? Ọ dịghị mkpa; nọmba ikuku a dabara adaba.
$ 730 Operandi Ejiji Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 10/37
Uwe Ganni Smock
Kpoo ha ụfọdụ ụdọ, olu na olu olu site n'ikike Ganni.
$ 325 Lisa kwuru Gah Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 11/37
Ulla Johnson Acacia Uwe
Agba, ruffles, ubu. Hụ kwa: nrọ ehihie nke oge ọkọchị.
$ 455 Ụlọ ahịa Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 12/37
Edemede Dip-Dye Slipdress mara mma
Uwe na-enwu gbaa ma na-ese na uwe mwụda a dị ịtụnanya na pụrụ iche. Jiri akwa ikiri ụkwụ mee ya maka agbamakwụkwọ oge ọkọchị, wee nye ya ihu na slides chunky na akpa ịwụ ụbọchị ọzọ.
$ 100 Eloquii Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 13/37
ASOS Na Style Plus x Lorna Luxe Puff-Sleeve Midi Dress
Baby ntụpọ ntụpọ ruo mgbe ebighị ebi.
$ 58 ASOS Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 14/37
Egbugbere ọnụ Sugar Am Amore Blue Floral Print Ruffled Maxi
Nọmba ọzọ frilly na ọnụ ahịa dị ụtọ.
Site n'ikike ika 15/37
Ihe ịrịba ama ndị ọzọ Bella Asymmetric Knit Jersey Midi Dress
Aghọtara ma dị mma dị ka hel, nke a na -abịa na ntinye ego maka toasty agba aja aja .
$ 175 Operandi Ejiji Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 16/37
Onye edemede nwanyị buru ibu nke ASOS
Mbipụta ifuru apụtaghị ihe na -enwu enwu. Wepụ ya na nhọrọ a mara mma, na -anọpụ iche nke ga -afụ ikuku nke ọma.
$ 135 ASOS Zụta ugbu a
kedu ihe mere anyị ji enwe nrọ ugboro ugboro
Site n'ikike ika 17/37
Ihe dị mkpa ndị ọzọ chọrọ mma Jacquard Satin Maxidress
Lee ngwakọta zuru oke n'etiti piich na odo. Ọ dị onye ọ bụla na-achọ mkpọchi Creamsicle?
$ 255 Ngwakọta ọnụ Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 18/37
Uwe akwa Mango
Akwala ụra na Mango ma ọ bụrụ na ị na -achọ ịchekwa mkpụrụ ego. Onye na-ere ahịa a ma ama ama ama na-abịa site na iji atụmatụ dị elu maka obere, gụnyere uwe a na-erughị $ 100 zuru oke maka ememme ogige.
$ 80 mango Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 19/37
Uwe akwa silk '90s Pearl Silk Slip Dress
Ị nweghị ike ịga nke ọma na kpochapụwo uwe mwụda , na akwa akwa silk nwere ọtụtụ ụdị - gụnyere nhọrọ ntụ ntụ na -acha anụnụ anụnụ nke ga -adịkwa mma nke ukwuu akpụkpọ ụkwụ ọ bụrụ na nwanyị a na -alụ ọhụrụ anaghị enwe mmasị na vibes ọdịda anyanwụ.
$ 365 Ncha akwa silk Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 20/37
Maka Ịhụnanya & Lemọn Minidress June
Ebumnuche okooko osisi na -egbuke egbuke nke '80s na' 90s na -ewu ewu n'oge na -adịbeghị anya, na onye na -agaghị enwe mmasị ilele obere nọmba a na -atọ ụtọ?
$ 222 Tụgharịa Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 21/37
Vix Ebipụtara Crepe de Chine Halterneck Maxidress
Uwe mara mma zuru oke nke ga-emesi oke osimiri ike nke ukwuu.
$ 228 Net-a-Porter Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 22/37
Uwe Dôen Drew
Frilly, pụrụ iche, na obere hippie-nhọrọ a zuru oke maka nnọkọ dị mma echebara n'ugwu.
$ 698 Doen Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 23/37
Uwe Poplin Cotton Ganni Bipụtara
Ee, ị nwere ike nweta akwa ndị nrụpụta na Amazon, na midi a dị mfe sitere na Ganni dị mma maka agbamakwụkwọ dị n'èzí.
$ 215 Amazon Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 24/37
Uwe uwe ime Zara Satin
Na-agụta ịbụ belle nke bọọlụ (mgbe nwanyị a na-alụ ọhụrụ) na uwe mwụda satin a nwere bọtịnụ sitere n'ike mmụọ nsọ.
$ 40 Zara Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 25/37
Uwe a na-egbu egbu nke Eloquii kwụsịrị
Site na bodice a na-ese anwụrụ ọkụ ruo uwe aka ya na mbipụta na-adọrọ adọrọ, anyị hụrụ ihe niile gbasara mpempe nkwupụta a n'anya.
$ 130 Eloquii Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 26/37
Uwe elu Poplin Midi Intermix Isla na -enweghị aka
Kwe ka nkọwa nkọwa dị n'ụdị poplin a kwuo okwu, ma jikọta ya na ihe eji achọ mma mgbe oge na -achasi ike.
$ 328 Ngwakọta ọnụ Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 27/37
Uwe Misa Claudita
Uwe a na -acha uhie uhie na -acha uhie uhie dị mma maka onye ọ bụla nke ka na -eme ara na ha enwetabeghị ịbụ nwa agbọghọ ifuru.
$ 410 Ụlọ ahịa Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 28/37
Ndozigharị Nikita Midi Dress
Agbamakwụkwọ bụ ọmarịcha ihe kpatara ị ga -eji atụba olu n'olu na ụta ubu, ịcheghị?
$ 248 Nordstrom Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 29/37
Charles Henry Floral Chiffon Midi Dress ogologo uwe
Enweghị oge, chic, na n'okpuru $ 100. Kedu ihe na -agaghị amasị?
$ 99 Nordstrom Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 30/37
ASTR akwa akwa Sonnet
Anyị kwuru na anyị nwere mmasị na lavender na ogwe aka puff? Naanị ijide n'aka.
$ 148 Amazon Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 31/37
Jessica Simpson Plus-Size Shay Ruffle-Trim Kechie Uwe
POV: Ị na -agba egwu n'okpuru ọkụ ọnwa na Yellow site Coldplay na -abịa.
$ 53 Amazon Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 32/37
Ndị na-enwu enwu ndị kwenyere na nzuzo na ịhụnanya anwụọla, nke a bụ maka gị.
$ 76 $ 57 Torrid Zụta ugbu a
toner maka ọbụlagodi akpụkpọ anụ
Site n'ikike ika 33/37
Uwe Zara Plaid
Agbamakwụkwọ picnic dị ala chọrọ n'ezie ọ dịkarịa ala otu onye ọbịa dabara na blanketị.
$ 50 Zara Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 34/37
Uwe akwa otu-ubu nke La Femme
Ọ dị mma, gaa n'ihu mechie ya na ọnụ ọgụgụ a dị elu, nwere otu aka. Naanị emerụ ha ahụ ugbu a.
$ 358 Nordstrom Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 35/37
Ụdị ọzọ a kara aka (n'otu n'otu) izuru ihe nkiri ahụ.
$ 168 Tụgharịa Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 36/37
Uwe a na-eyi akwa akwa
Obere ihe n'ubu anaghị afụ ụfụ.
$ 169 Nordstrom Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 37/37
Onye egbugbere ọnụ shuga na-apụ apụ n'ubu ya-Minidress
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, minidress pastel iji mechaa ihe na obere ọkụ na ikuku.
$ 32 Amazon Zụta ugbu a
esi egbutu ogologo ákwà mgbochi bangs
ngwaahịa ntutu iji mee ka ntutu too ngwa ngwa
nlekọta anụ ahụ kacha mma maka ihe karịrị afọ 50
Agba ntutu ntutu oge opupu ihe ubi 2021